La ngamaxabiso acociweyo e-Honor 20 kunye ne-20 Pro [+ Ukucaciswa] | I-Androidsis
La ngamaxabiso acociweyo e-Honor 20 kunye ne-20 Pro [+ Ukucaciswa]
Iifowuni zeflegi Imbeko 20 kunye nembeko 20 Pro Bazakwenziwa ngokusemthethweni ngoMeyi 21 ngomnyhadala wentetho eLondon. Ezi fowuni ziya kubhengezwa e-China nge-31 kaMeyi.
Ngaphambi kokuba yenzeke, umntu ongaphakathi, owaziwa ngokuvuza ulwazi malunga neHuawei kunye neHonours, uye wabelana ngamahemuhemu malunga Imbeko 20 kunye Hlonipha amaxabiso angama-20 ePro, kwaye balandelayo…
1 Imbeko 20 kunye nembeko 20 Pro amaxabiso avunyiweyo
2 Imbeko 20 kunye neNhlonipho 20 Pro Ukucaciswa okuVuziweyo
Imbeko 20 kunye nembeko 20 Pro amaxabiso avunyiweyo
Hlonipha ama-20 kunye nama-20 amaxabiso ePro
Ngokwe-insider, i-Honor 20 iya kufika kwiimodeli ezintathu: i-6 GB ye-RAM + i-128 GB yokugcina, i-8 GB ye-RAM + i-128 GB yokugcina kunye ne-8 GB ye-RAM + 256 GB yokugcina. Ezi modeli zinamahemuhemu okuba nazo Amaxabiso ngokulandelelana kwe-2,699 yuan (~ 349 euros), 2,999 yuan (~ 388 euros) kunye ne-3,499 yuan (~ 453 euros).
I-Honor 20 Pro iza kuza ne-8GB ye-RAM + 128GB yokugcina kunye ne-8GB ye-RAM + 256GB yokugcina. Ezi modeli zinayo Amaxabiso ngokulandelelana kwe-3,699 yuan (~ 479 euros) kunye ne-4,199 yuan (~ 543 euros).
Uhlelo lwe-Honor 20 Pro Moschino kulindeleke ukuba lube semthethweni e-China. Ukuvuza kutyhila ukuba iyakupakishwa nge-512GB yokugcina eyakhelweyo. Nangona kunjalo, akukho lwazi malunga nokuba ingakanani i-RAM eya kuthi ifike nayo.
Imbeko 20 kunye neNhlonipho 20 Pro Ukucaciswa okuVuziweyo
Imbeko 20 unikele
Ekuqaleni kwale veki WinFuture.de kwabelwane ngayo Zonke iinkcukacha ze-Honor 20 smartphone kunye nemifanekiso yayo. Utyhile ukuba isixhobo sizakufika nge Iphaneli ye-IPS ye-IP intshi ye-6.26 ngomngxunya kwikona yayo ephezulu ngasekhohlo ukuze ubeke ikhamera yeselfie engama-32. Inkqubo ye- Kirin 980 iya kuyinika amandla ifowuni kunye ne-6GB ye-RAM. Inokuza nokugcinwa kwendalo kwe-128GB.
I-smartphone iya kubandakanya I-3,750 mAh ibhetri leyo inokuza ne-SuperCharge iteknoloji yokutshaja ngokukhawuleza. Inkqubo yokuSebenza ye-UI 9 enencasa ye-Android 2.1 Pie iya kufumaneka ngaphambi kokufakwa kwisixhobo. Igobolondo elingasemva lefowuni linokubonisa ukuseta kwekhamera ye-quad kunye ne-586-megapixel Sony IMX48 sensor yokuqala, ilensi ye-16-megapixel ye-angle-angle lens, i-8-megapixel lens telephoto lens, kunye ne-2-megapixel lens macro.
I-Honor 20 inokubonisa a isivamvo somnwe esakhiwe kwiqhosha lamandla. Inokuza ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye naphakathi kobusuku phakathi kwemibala eyahlukileyo.
Ngakolunye uhlangothi, Inguqulelo yePro inokuxhotyiswa ngescreen se-6.5-intshi ye-OLED kwiscreen sokubonisa iminwe, i-32-megapixel yangaphambili ye-snapper, inkqubo yekhamera ehamba phambili, i-chip ye-Kirin 980, i-8 GB ye-RAM, ukugcinwa kwendalo ukuya kuthi ga kwi-256 GB kunye nebhetri ejikeleze i-4,000 mAh ngobuchwephesha bokutshaja ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » La ngamaxabiso acociweyo e-Honor 20 kunye ne-20 Pro [+ Ukucaciswa]
Nantsi indlela i-Samsung enokuthi iphelise ngayo iingxaki zescreen seGlass
I-OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro: ukuthelekisa okunzulu